Arjiga safaarada ama qunsuliyada guud - Migrationsverket
/ Arjiga safaarada ama qunsuliyada guud
Ansökan vid ambassad eller generalkonsulat – somaliska
Halkan waxaad ka heleysaa warbixin sida aad u codsanayso arjiga ku saabsan sharciga deggenaanshaha haddii aanad bogga interneka ka codsankaran.
Adiga ayaa arjiga shakhsiyan u geynaya safaarada ama qunsuliyada guud ee ay iswiidhishku leeyihiin ee kuugu dhow. Waa ku khasban tahay adigu inaad xiriir la sii samaysid safaarada ama qunsuliyada si aad u oggaato nidaamka ay maraan marka arjiga codsiga ah loo geynayo iyo wakhtiga ay ballanta interfiyuuga kaa qaadayaan. Marka interfiyuuga lagaa qaadayo waxa lagu weydiinayo waxa ka mid ah xiriirka aad la leedahay dadka qoyskaaga ah ii Iswiidhan jooga. Waxa kale oo kaantarool lagu samaydoonaa dukumentigaaga orijanaalka ah ee aad haysato. Halkan hoose ka fiirso webka internetka ee Safaarada iyo Qunsuliyada.
Sidan ayaad adigu u codsanaysaa
Waxaad adigu isticmaalaysaa foomka Application for residence permit to settle in Sweden, number 161011.
Carruurta 18 jir ka yar foomka ayaa lagu qorayaa Residence permit to settle in Sweden – for a child under the age of 18, number 163011.
Warqadda Family details, number 239011, ku lifaaqan xitaa qofkasta oo codsanayaa wuu soo buuxinayaa.
Application for residence permit to settle in Sweden, number 161011
Residence permit to settle in Sweden – for a child under the age of 18, number 163011
Family details, number 239011
Tijaabada lagaa qaadayo (DNA-prov)
Waxaad saxiixidoontaa dukumenti macnahiisu yahay inaad safaarada ama qunsuliyada guud aad u oggolaato inay adiga tijaabo kaa qaadaan (DNA-prov). Qofka aad isqabtaan ee Iswiidhan joogaana wuxuu qoridoonaa dukumenti la mid ah aad adigu saxiixday kaas oo Hey’adda laanta socdaalka u oggolaanaya in nin iyo naag kuu doonaba ha noqdee laga qaado tijaabo (DNA-prov.). wuxuu markaa qofka aad isqabtaan geyndoonaa xafiiska Hey’adda laanta socdaalku leedahay.
Codsiga baasaboorka dadka ajaanibka Ansökan om främlingspass
Haddii aanad adigu haysan baasaboor waxaad xitaa u baahan tahay inaad codsato baasaboorka dadka shisheeyaha loogu talagalay (främlingspass) marka aad codsanayso sharciga deggenaanshaha. Waxaad baasaboorka dadka shisheeyaha la siiyo (främlingspass) u codsanaysaa adigoo buuxinaya foomka Application for an alien's passport, number 191011. Safaarada ama qunsuliyada guud ayaad ka codsanaysaa marka aad foomka keeneyso ama marka interfiyuuga lagaa qaadayo. Kala xiriiri safaarada ama qunsuliyada warbixin intaa dheer sida aad u codsanayso baasaboorka dadka shisheeyaha la siiyo (främlingspass)
Application for an alien's passport, number 191011
Dadka inta badani waxay bixiyaan kharash loogu talagalay arjiga codsiga marka ay arjiga safaarada ama qunsuliyada u geynayaan.
Warbixin ku saabsan kharashka la bixinayo oo ingiriisi ah (oo af ingiriis)
Marka go’aanka la gaaro kadib
Marka go’aanka la gaaro kadib waxa loo diryaa safaarada ama qunsuliyada guud. Haddii qof aad qaraabo tihiin oo joogo Iswiidhan aad awood buuxda u siisay inuu adiga wadkiil kaa noqdo, isaga ama iyada ayaa loo dirayaa go’aankii la gaaray, qofkaas ayaa markaa adiga ku wargelinaya.
Haddii lagu siiyo sharciga deggenaanshaha
Haddii lagu siiyo sharciga deggenaanshaha waxa markaa lagu siinayaa kaarka sharciga deggenaanshaha. Kaarku wuxuu caddeynayaa inaad adigu leedahay sharciga deggenaanshaha.
Si ay Hey’adda laanta socdaalku kuugu samayso kaarka sharciga deggenaanshaha, sawir ayaa lagaa qaadidoonaa farahana waa lagaa sawiridoonaa marka aad safaarada ama qunsuliyada guud joogto. (carruurta da’doodu ka yar tahay 6 jir uma baahna in faraha laga sawiro). Arrintan waxa la samaynayaa markaad foomka soo xaraynayso, ee intefiyuuga lagaa qaadayo, ama marka aad hesho sharciga deggenaanshaha.
U fiirso arritani waxay qaadankartaa ilaa iyo afar usbuuc si loo sameeyo isla markaana safaarada ama qunsuliyada loogu soo diro kaarka sharciga deggenaanshaha. Markaad Iswiidhan geleyso, waxaad ku khasban tahay inaad tusto kaarkaaga sharciga deggenaanshaha oo uu la socdo baasaboor la ansaxiyey.
Safaaradaha iyo qunsuliyaduhu waxay leeyihiin bogga internet ah oo iyaga u gaar ah